आफ्नै श्रीमतीलाई माया गरेर मनाऔँ 'भ्यालेन्टाइन्स डे' - हाम्रो देश
काठमाडौँ आफैँलाई माया गर्नु जीवनका लागि सञ्जीवनी हो । त्यसपछि मात्र हामी अरुलाई खुलेर माया गर्न सक्छौँ । यो ‘भ्यालेन्टाइन्स डे’मा थाहा पाऔैँ, कसरी आफैँलाई माया गर्ने भनेर । २४ घण्टामा हाम्रो दिनको पूरा समय घर र अफिसको काम गर्दैमा बित्छ । राति सुत्ने समयमा पनि ‘भोलि के–के गर्नु छ’ भन्ने कामको हिसाबकिताब गर्दैमा बित्छ । तर, मुख्य प्रश्न यहाँनेर उब्जन्छ, दिनरात नभनी काम गर्दा पनि किन हामी खुसी हुन सक्दैनौँ ? तपाईं किन खुसी हुनुहुन्न ? यसकारण कि, तपाईंको हेरचाह कसैले गर्दैन, वा कसैले तपाईंलाई समय दिँदैन ?
विशेषज्ञ पनि मान्दछन्, जब हामी स्वयं आफ्नै आलोचना गर्छौं या हरेक समय नकारात्मक सोच्छौँ, हाम्रो शरीरमा तनाब बढाउने हर्मोन उत्पन्न हुन्छ र हामीमा झन् तनाब थपिँदै जान्छ । आफूलाई माया गर्नुको मतलब स्वार्थी हुनुपर्छ भन्नेचाँहि होइन । बरु आफ्नो ख्याल र माया आफैँ गर्नुपर्छ भन्ने हो । यदि तपाईं अरु आफूप्रति आकर्षित होऊन् र आफ्नो अस्तित्वलाई बुझून् भन्ने चहानुहुन्छ भने पहिले स्वयं आफूलाई माया गर्नुहोस् ।
आफूलाई प्रेम गर्नुको एउटा मतलब यो पनि हो कि तपाईं रुपले जस्तो हुनुहुन्छ, त्यसैलाई स्विकार्नु । संसारमा सुन्दर मान्छेको कमी छैन, तर यसको मतलब यो होइन कि तपाईं आफ्नो तुलना अरुसँग गर्नुस् । सुन्दर शारीरिक रुपले मात्र भइँदैन, यसमा तपाईंको ज्ञान, सोच, विचार, बुद्धिमता आदि–इत्यादिको दायरा पनि पर्छन् । आफ्नो व्यक्तित्वलाई सन्तुलित बनाइराख्नुपर्छ । यसले तपाईंको आत्मविश्वास बढ्छ । कसैलाई आदर्श बनाउनुस्, तर उसैको सिको गर्नुको साटो उसबाट प्रेरित भएर आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन प्रयास गर्नुस् ।
जीवनमा केही नयाँ गर्न मन छ भने बिहान उठ्दा सर्वप्रथम ऐनामा आफ्नो अनुहार हेर्नुस् र आफैँलाई ‘गुड मर्निङ’ भन्न सुरु गर्नुस् । सोच्नुस् कि तपाईंको आज विशेष हुनेवाला छ । आफ्नो हरेक दिनलाई एक नयाँ र विशेष दिन मान्नुहोस् । आफूलाई माया गर्ने मान्छेहरु शारीरिक र मानसिक रोगबाट टाढा हुन्छन् । यो यसकारण कि, आफूलाई माया गर्नेहरु खानपिन र स्वस्थ्यमा धेरै सजग भएको पाइन्छ । यो तपाईंको शरीर हो । त्यसैले, यसको हेरचाह गर्ने जिम्मेवारी पनि तपाईंकै हो ।
तपाईंको कुनै ठाउँ जाने वा कुनै काम गर्ने इच्छा होला । छ भने यो भ्यालेन्टाइनमा त्यो इच्छा पूरा गर्नुस् । आफूलाई गर्न मन लागेको कुरालाई प्राथमिकता दिनुस् । जुन स्टाइल तपाईं गर्न चाहनुहुन्छ, गर्नुस् । आफूलाई मन लागेको गेटअप गर्नुस्, आत्मविश्वास बढ्छ । कसैले भनेको छ, ‘यदि तिमी आफैँलाई माया गर्न सक्दैनौ भने अरुलाई पनि माया गर्न सक्दैनौ ।’ यो भनाइ निकै मुनासिब छ । आफैँलाई माया गर्नु भनेको अरुलाई माया गर्न सक्ने सामथ्र्य जुटाउनु हो ।